Mutauri akanakisa weBluetooth we iPhone | IPhone nhau
Kutenga mutauri unoenda zvakanaka needu iPhone hachisi chinhu chiri nyore. Ichokwadi kuti kune vazhinji vatauri veBluetooth pamusika, asi ichokwadi zvakare kuti tinogona kumhanya mune imwe inoguma isisakwanise tarisiro yedu (uye, nditende, ndinoziva zvandiri kutaura nezvazvo). Tinogona kutenga mutauri usingadhuri, asi zvinoenderana nekuti tiri kupokana nezwi here kana kwete. Kubheja kwakachengeteka, uye zvakanyanya izvozvi kuti zvadzikiswa paAmazon, ndiyo Bose SoundLink Mini II. Kana iwe uchida kuona mutengo wayo wekutengesa unofanira chete tinya pano.
Iyo SoundLink Mini II inowanikwa mu Mavara maviri: Marasha uye Pearl. Kunyangwe chiri chokwadi kuti ini ndinofarira iro Pearl Ruvara zvirinani, ichokwadi zvakare kuti izvi zvinoenderana nekuti tichaisa kupi. Kunyangwe zvisiri kuti isu tiri kuzozviona zvakawandisa. Kukura kwayo kudiki kwe5,1 x 18 x 5,8 cm yakanyanya kuderera kana kushoma chero ipi router, nehurefu hwakati wandei uye hwakadzika kuderera. Isu tinoriisa kwataiisa, zvinotaridzika zvakanaka.
1 Bose SoundLink Mini II - Inotakurika Bluetooth Mutauri
1.1 Zvimiro zveBose SoundLink Mini II
1.2 Nei ichifungidzirwa semutauri akanakisa weBluetooth kune iPhone?
1.3 Nei iyo SoundLink Mini II uye kwete mumwe mutauri weBluetooth?
2 Tenga Bose SoundLink Mini II Bluetooth mutauri
Bose SoundLink Mini II - Inotakurika Bluetooth Mutauri
Zvimiro zveBose SoundLink Mini II
Size: 5,1 X 18 X 5,5 masendimita
Kubatana: Bluetooth (anosvika masere masere - maviri panguva imwe chete), 8mm jack uye mini-USB.
Autonomy: 10-16 maawa (ndizvo zvinotaurwa naBose). Kubhadharisa kuburikidza neUSB, izvo zvinotibvumidza kuti tizvibhadharise chaizvo chero kwatinoitora. Bhatiri iri nyore kutsiva (izvo zvakakosha kwazvo kwandiri zveramangwana).
Kana iri simba rayo, senguva dzose, Bose haana kusanganisira iyo data chero kupi. Zvinonzwika zvakanaka, zvine mashoma kudzikama kwakanaka, pakati nepakakwirira, kunyangwe vamwe vashandisi vachiti yarasa mhando ichienzaniswa neyekutanga vhezheni. Chero zvazvingaitika, zvinowanzoitika kuti kana isu tine mudziyo wedu wakagadzirirwa mutauri, mune imwe zvakasiyana hainzwike seyakanaka. Zvinogona kutaurwa kuti zvinoshamisa kuti huwandu hwakadii uye (hama) simba rinogona kuwanikwa munzvimbo diki yakadaro.
Nei ichifungidzirwa semutauri akanakisa weBluetooth kune iPhone?
Iyo Bose SoundLink Mini II mutauri Yakachinjika kwazvo. Iwe unogona kutamba chero chero mimhanzi (mumwe munhu ane zvishoma ... zvakasiyana zvekunakidzwa zvemimhanzi zvinokuudza) uye mhando yeruzha rwayo inogara yakatanhamara. Vamwe ndevekufunga kuti dhizaini yacho iri mune yakachena Apple maitiro, kunyange ini ndisingabvumirane zvakanyanya neshoko iro. Dhizaini yacho yakanaka, asi haina kunaka sezvimwe zvigadzirwa zveApple (kunyangwe paine zvimwe zviri nani pasi petipeti, senge nyowani bhatiri kesi ine hump kumashure).
Yayo yazvino (uye nguva dzose) mutengo wakaderera pane iyo 259 € iyo iyo Beats Pill + inodhura (kutora muenzaniso wemukurukuri ane mukurumbira ane hukama neApple). Uye kana tikatarisa kuti ruzha rwacho rwuri pamusoro zvakanyanya, iyo SoundLink Mini II inozoerekana yave yakanaka sarudzo yehunhu hwayo / mutengo wero.
Nei iyo SoundLink Mini II uye kwete mumwe mutauri weBluetooth?
Isu tinogona kunyatso kutaura kuti vatauri vese "vakafanana", mune makotesheni. Asi iyo SoundLink ine yakanyanya kunaka zvese mune imwe nzvimbo diki kwazvo izvo zvinotibvumidza kuti titore chero kupi uye tinakirwe neruzha ruzha. Vamwe vatauri vakakura uye vanopa ruzha rwakafanana kana rwakaderera, chimwe chinhu chisiri ichi chinyorwa chechipiri cheBose mutauri anotakurika.
Tenga Bose SoundLink Mini II Bluetooth mutauri
Panguva yekunyora uku, iyo Bose SoundLink II iri kutengeswa kuAmazon ine dhisikaundi ye12% inoisiya mu yekupedzisira mutengo we € 176,01. Mutengo wadzo wenguva dzose uri € 199,95, saka tinochengeta € 23,94. Haisi mari, asi chero chengetedzo inogamuchirwa. Muchitoro chimwe chete, kuongororwa kweiyi diki Bose mutauri ine ingangoita 4,5 kubva pa5 nyeredzi dzinogona kuitika, izvo zvinoratidza kuti ruzhinji rwevashandisi vanogutsikana nekutenga kwavo.
Muchidimbu, kana izvo zvauri kutsvaga zviri zvemhando yepamusoro, dhizaini inoshamisa uye saizi yakadzikiswa kusvika pa mutengo hauna kudhuraIwe unogona kufarira kutenga Bose SoundLink Mini II. Bose harisi rakakodzera mhando mumimhanzi yekupa yakaderera-mhando zvishandiso. Handitaure kuti kubheja kwakachengeteka nekuti kunogara kune mutengi asiri kufara nekutenga kwavo, asi kubva kune izvo vazhinji vashandisi uye ini ndakakwanisa kuona (kana, zvirinani, kunzwa), handinzwisise kushoropodzwa uku . Chero zvazvingaitika, munhu mumwe nemumwe akasiyana uye ane maonero ake.
Kudzokorora kwe: Pablo Aparicio
Bhatiri inogona kutsiviwa nyore
Ruzha rwakanaka munzira ipi neipi yemumhanzi
Yakakura mutengo / mhando chiyero
Hapana, tichifunga saizi yayo
Kuzvitonga, kunyangwe kwave nani, hakuwanzo kusvika 16: XNUMX p.m.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Bose SoundLink Mini II, yakanaka, yakanaka uye isinganyanye kudhura mutauri weBluetooth
Akashinga, ndiye mutauri asina waya.
Ndine soundlink || uye ndinofara nehupenyu hwebhatiri uye hunhu hweruzha
Ndinoziva kuti hupenyu hwebhatiri hwakawedzera, ikozvino hwave husina maoko-hwekufona, ini ndinoshandura kune micro usb charger, uye inouya iri grey uye nhema, asi mune ruzha? Pane here musiyano nemhando yapfuura? Zvishoma? Zvakafanana? Ndine yekutanga uye kunyangwe ndichifara ndinoda kuzvimisikidza ... Asi zvakakosha here? Unogona here kuudza musiyano wezwi? Kana zvinonzwika zvakafanana here?
Mhoroi, Edu. Izwi, vakadaro avo vakave vese, rakachinja, asi kwete kune iro rakanaka kana rakaipa. Iwe wachinja iyo firmware, zvinoreva kuti une chakasiyana kuenzana. Iwe unofanirwa kuwana iyo poindi kubva pachigadzirwa, mune ino kesi iPhone, kana zvakare kubva kune mutauri.